China E-3 Shell Electric Water Fountain kwemveliso kunye Factory | Ukudibanisa
I-E-3 I-Shell Electric Water Fountain isebenzisa isixhobo sokucoca-maleko esine ukubonelela ngamanzi okusela asempilweni kwizilwanyana ezifuywayo: i-mesh yangaphambi kokucoca ulwelo lokucoca ukungcola okunje ngeenwele, kunye nefilitha yokuxinana okuphezulu kunye neqokobhe lekhokhonathi eyenziwe yasebenza ngekhabhoni ukucoca intle , umhlwa kunye namanye amasuntswana amancinci, kunye nokufunxa intsalela yeklorini, njl njl. Izinto ezinobungozi, umaleko ongaphantsi usebenzisa i-reson yokutshintsha ityhubhu ukomeleza ukuhluza iion eziyingozi ezinje ngeesinyithi ezinzima ukuqhubela phambili ukuphucula umgangatho wamanzi.
Impompo yamanzi cwaka
Izilwanyana zasekhaya, ngakumbi iikati okanye iinjana, kunokwenzeka ukuba zibangele uloyiko okanye uxinzelelo ngenxa yesandi esikhulu. Ke ngoko, xa usondla izilwanyana, kungcono ukuba ungenzi ingxolo enokubachaphazela, kungenjalo iya kubenza bazive benganyangeki. Nangona kunjalo, i-E-3 Shell Electric Water Fountain
Sebenzisa impompo yamanzi ene-12V esezantsi, ukuvelisa kuphela ii-decibel ezingama-40 zesandi xa usebenza, esezantsi kakhulu kunethamo lokuqondwa kwendlebe yomntu
Imini nobusuku imo ezimbini
Gcina iimeko eziqhelekileyo zokusebenza ngexesha lasemini, kwaye ebusuku unokuvula isibane esikhokelwayo ukukhumbuza isilwanyana malunga nomthombo wokusela. Umzekelo, xa ukwindawo engaphandle okanye xa usiya kwindawo yokuhlala entsha nesilwanyana sakho, ikati okanye inja iyakuziva ingaqhelananga nendawo ezibangqongileyo, ngakumbi ebusuku. I-E-3 Shell Electric Water Founting iya kubanceda.
Misela ukuhamba kwamanzi
Xa kuthelekiswa neminye imithombo yokusela ezenzekelayo, i-E-3 Shell Electric Water Fountain inokuhlengahlengisa ngokukhululekileyo ubungakanani bokuhamba kwamanzi, okulunge ngakumbi kwimikhwa yokusela yezilwanyana zasekhaya ezahlukeneyo. Iqhina lokuhlengahlengisa ukuhamba kwamanzi lenzelwe phezulu, elinokulawula ngokulula ukuhamba kwamanzi, okulungele zonke iintlobo zezilwanyana zasekhaya.
Egqithileyo I-E-2 Umthombo wokuSela iApple
Okulandelayo: Indlu yeNdlu yokungena manzi yangaphandle 403